त्यो साथै रमाइलो,रातै रमाइलो « Sagarmatha News
- विमला हुमागाई
केही दिनदेखि मेरो पेट दुखिइरहेको थियो । सँगसँगै महिनावारी गड्बडी त छँदै थियो ।
आइतबार म अस्पताल पुगे । ठूली आमाको छोराले डाक्टर आउने कोठामा राखे मलाई । के थाहा मलाई, यही अस्पतालबाट सुरु हुँदैछ मेरो जीवनको नयाँ अध्याय ? म त चुपचाप बिरामीहरूको लाइनमा बसेर डाक्टरले जाँच्ने कोठाभन्दा बाहिरको भित्ताभरि अनेक स्वास्थ्य–सन्देश लेखिएका ठूला–ठूला पोस्टर हेर्दै थिएँ । डाक्टर आइपुगेकै थिएनन् ।
केही समयपछि एकाएक सबै बिरामी र तिनीहरूसँग आएका आफन्तहरूको अनुहारमा उज्यालो पोतियो । सबै चनाखो भएजस्ता देखिए । डाक्टर आउँदै रहेछन् ।
नीलो सर्ट र खैरो पाइन्ट लगाएका थिए, उनले । बाहिरबाट सेतो गाउन लगाएका थिए । गोलोगोलो अनुहार, आँखामा चौडा खालको चस्मा, लामो नाक– आकर्षक देखिएका थिए उनी । उचाइ पाँच फिट सात इञ्चजति थियो होला ।
उनमा एउटा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के थियो भने उनी हँसिलो अनुहारका देखिएका थिए र यतिबेला मुसुमुसु हाँस्दै हिंडिरहेका थिए । मानौं, उनीभन्दा अघिअघि मुस्कान हिंडिरहेको छ र उनले त्यो मुस्कानको पदचिह्नलाई पछ्याइरहेका छन् ।
उनलाई देख्नेबित्तिकै बिरामीहरूले नमस्कार गरे । उनले मुस्कानसहित नमस्कार फर्काए । त्यसपछि कोठाभित्र मुस्कानसहित नै छिरे ।
अघि सुस्ताएका बिरामीहरू जाँगरिलाजस्ता देखिए । कोठावरिपरि चहलपहल सुरु हुन थाल्यो । म लगभग दस जना बिरामीभन्दा पछाडि थिएँ र आफ्नो पालो कुरेर त्यो परिवेशमा मौजुद सबै घटना चाखलाग्दो तरिकाले हेरिरहेकी थिएँ ।
मैले विशेष चाखलाग्दो गरी हेर्नुको कारण थियो, केटी मान्छेलाई जाँच्ने डाक्टर पनि केटी मान्छे नै हुन्छन् होला भन्ने सोचेकी थिएँ । डाक्टरका रुपमा पुरुषलाई देख्दा सुरुमा त म झस्किएँ पनि । सातो नै गएजस्तो अनुभव भयो एकपटक त । मलाई अचम्म लाग्नुका साथै डर पनि लागिरहेको थियो ।
मैले वरिपरि नियालें । अरू केटीहरू पनि थिए त्यहाँ । त्यसपछि भने अलि ढुक्क भयो मलाई । तर पनि मभित्र अङ्कित डरका रेखाहरु मेटिइसकेका थिएनन् । आफ्नो समस्या पुरुष डाक्टरसामु कसरी सुनाऊँ भन्ने लागिरहेको थियो । अलि बुढो डाक्टर भइदिएका भए पनि त तैविशेक ! उनी त लगभग मेरै उमेरका थिए ।
एक मनले त नजचाइँ फर्कूं कि भन्ने पनि लाग्यो । तर, डरपोक भएर नजचाइकन समस्या बोकेरै फर्किनु पनि त भएन ।
मैले डाक्टरबारे किनकिन धेरै नै सोचिरहेकी थिएँ । उनलाई र आफूलाई नजानिँदो तरिकाले तुलना गरिरहेकी थिएँ । त्यही बीचमा म उनीप्रति कताकता आकर्षित पनि भएकी थिएँ । स्वाभाविकै पनि हो, आफ्नै उमेरको विपरीत लिङ्गीतर्फ आकर्षित हुनु ।
उमेर पुगेका केटा या केटीमा आफ्नै उमेरका विपरीत लिङ्गी देख्दा आकर्षण उत्पन्न भएन भने त्यसलाई समस्या ठान्नु पर्छ । एउटा स्वस्थ मान्छे काम, क्रोध, लोभ, मोहले जेलिएका हुन्छन् । यस्ता मानवीय भाव उत्पन्न भएनन् भने त्यस्ता मानिसमा खोट देखिनु स्वाभाविकै हो । सायद ममा भित्रभित्रै कामभाव जागिरहेको थियो ।
उनलाई मैले पहिलोपटक देखेकी थिएँ । अहिलेसम्म उनीजस्तो मान्छेको कल्पना नै गरेकी थिइनँ । नदेखेको मान्छेको कल्पना गर्न पनि सकिदैन । कल्पना गरेजस्तो वास्तविकता हुँदा पनि हुँदैन । तैपनि यतिखेर मेरो मन चञ्चल बनेको थियो । आफ्नै उमेरका डाक्टरले आफ्नो जाँच गर्दै छ, त्यो पनि महिनावारी गड्बडी र पेटसम्बन्धी । यो कुरा सम्झिँदा कताकता काउकुती लागेको अनुभव भइरहेको थियो मलाई ।
मैले पहिला शिविरमा जचाउँदा एउटी पाकी महिला डाक्टरले जाँचेकी थिइन् । उनीसँग मैले त्यस्तो कुनै असजिलो अनुभव गरेकी थिइनँ । यस अस्पतालमा पनि मैले त्यस्तै अपेक्षा गरेकी थिएँ सायद, त्यो नभएपछि चञ्चल हुन पुगेकी थिएँ ।
“कल्पना पौड्याल, भित्र आउनुस् !” आफ्नै भावमा डुबिरहेकी थिएँ म । आफ्नो नाम बोलाएपछि झसङ्ग भएँ ।
अलिकति डर, अलिकति लाज, अलिकति काउकुती, अलिकति असहजता, अलिकति असुरक्षा, अलिकति आँट र अलिकति मुस्कान बोकेर म डाक्टरको कोठाभित्र छिरे । छेउमा नर्स उभिएकी थिइन् । उनैले हातले इसारा गर्दै बस्न भनिन् । भित्तामा पाठेघरको ठूलो चित्रअङ्कित तस्बिर टाँगिएको थियो । छेउकै अर्को तस्बिरमा भने आमाले बच्चालाई दूध खुवाउँदै गरेको देखिन्थ्यो र नजिकै ठूलो पेट भएकी महिलालाई पुरुषले हात समातेर अस्पताल लैजाँदै गरेको तस्बिर पनि थियो । मैले एक नजर पूरै कोठामा दौडाएँ । “नमस्कार सर !” दुई हात जोडेर भने“ । यति भन्दै गर्दा मेरो डरको पारो अलिकति चढिसकेको थियो ।
उनले मतिर हेरे र मुसुक्क हाँसे, पहिला । मानौं, उनले मलाई वर्षौंदेखि चिनेका छन् । हामी पहिल्यैदेखिका परिचित हौं । भनिन्छ, डाक्टरहरूको बिरामी निको पार्ने आधा औषधि त उनीहरूको अनुहारमा देखिने मीठो मुस्कान र बिरामीसँग बोल्ने नम्र बोली नै हो ।
उनले अत्यन्तै सहज रुपमा नमस्कार फर्काए । सायद उनी मेरो अनुहारमा देखिएको असहजता हटाउन चाहन्थे । सहज वातावरण तयार गरेर मेरो रोगको सही पहिचान गर्न चाहन्थे ।
म डराइरहेकी थिएँ तर कताकता मलाई पनि उनी सधैंका परिचितजस्तै लागिरहेको थियो । त्यसैले त मैले उनको मुस्कान र नमस्कार मुद्रामा जोडिएका हात दुवै आकर्षक देखिरहेकी थिएँ ।
हामी दुईबीच डाक्टर र बिरामीको मात्रै सम्बन्ध थियो, तर कताकता त्योभन्दा बढी नै छ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई ।
उनले मलाई एकपटक राम्रोसँग हेरे र आफू अगाडिको कुर्सी देखाउँदै ‘बस्नुस्’ भने । उनको अनुहारको मुस्कान भने जस्ताको तस्तै थियो । मानौं, उनी गर्भबाटै मुस्कानसहित जन्मिएका हुन् । शरीरका अन्य अङ्गहरूजस्तै मुस्कान पनि उनको एक अभिन्न अङ्ग थियो ।
म त टोलाइसकेछु । उनले अलि जोडले बस्नुस् भनेपछि पो झसङ्ग भएँ ।
म बसें । उनले मलाई नै हेरिरहेका थिए । मैले पनि हेरें । हाम्रा आँखा जुधे । एकैछिनका लागि चार आँखा एक भए । त्यतिन्जेल आफ्नै परिचयको पनि बोध बाँकी रहेन ममा । तर त्यो हेराई नितान्त दुई अपरिचितबीचको थियो ।
जब होसमा आएँ म, अलिकति लजाएँ । उनी पनि मुन्टो फर्काउँदै मुस्कुराए । कोठामा मुस्कान र लाज मिसिएको अजीवको वातावरण जन्मियो । मादकता छाएजस्तो । यस्तो मादकता मैले जीवन–यात्राको क्रममा सायदै अनुभव गरेकी थिएँ । हामी दुवैले मादकताबाट आफूलाई बचाउन खोजिरहेका थियौं, आफ्नो चेतन मनलाई सम्हालिरहेका थियौं । पत्तै नपाई, त्यो नै सुरुवात बन्यो– हाम्रो प्रेमको ।
साँच्चै, कुनै–कुनै सम्बन्ध किन यस्तो हुन्छ होला ? पहिलो पटकको भेटमै कति आत्मीय लाग्ने । सबै खालको भाव एकैपटक निस्केर आउने । डर, लाज, आनन्द, ग्लानी, सबै–सबै । सधैं उनीसँगै बसिरहूँ जस्तो लाग्ने ।
उनले मलाई गहिरोसँग हेर्दै सोधे, “के समस्या छ तपाईंलाई ?”
मेरा र उनका आँखा जुध्न छाडेका थिए । मैले एकछिनभन्दा हेर्नै सकिनँ उनका आँखामा । लाज लाग्यो । यतिखेर मेरा आँखा झुकेका थिए ।
मैले आफ्नै शरीरको तलतिर हेर्दै भनें, “दुख्छ ।”
मेरो आवाज अलिअलि काँपेजस्तो पनि भइराखेको थियो । लाज त भइहाल्छ नि केटी मान्छेलाई केटासामु आफ्नो समस्या बताउनुपर्दा । त्यो पनि पहिलोपटक ।
“कहाँनेर दुख्छ ?” उनले वातावरणलाई सहज बनाउन खोजे । म सहज बनूँ भन्ने उनको चाहना थियो सायद ।
हुन पनि उनको काम नै यही त हो, उनलाई केको गाह्रो ? मजस्ता बिरामी उनले अहिलेसम्म कति धेरै हेरिसकेका छन् होला । यति पनि गर्न सकेनन् भने उनी डाक्टर भएको काम पनि त भएन ।
आफ्नो दाहिने हातको चोरऔंलाले इसारा गर्दै मैले आफ्नो तल्लो पेटतिर देखाएँ ।
उनले मेरो पेट छाम्लान् कि भन्ने डर थियो मलाई । धन्न छामेनन् ।
“छामेको भए त म लाजले भुतुक्कै हुन्थें होला ।” सम्झिँदै काउकुती लागेर आयो । डर पनि उत्तिकै ।
पहिला जचाएको महिला डाक्टरले पेटको ठाउँठाउँमा थिचेर सोधेकी थिइन्, “दुख्छ ?”
दुख्ने ठाउँमा पुगेपछि मैले ‘ऐया’ भनेकी थिएँ । त्यही डर थियो मलाई अहिले । धन्न, उनले छोएनन् ।
उनले एउटा कागजमा खररर कोर्न थाले । उसै पनि डाक्टरका अक्षर औषधि पसलेले मात्रै बुझ्छन् भनिन्छ । सामान्य मान्छेलाई कालो अक्षर भैंसी बराबर ।
एकैछिन कागजमा लेखिसकेपछि उनले मसँग फेरि सोधे, “अरू केके हुन्छ ?”
अब म अलिअलि सहज बनिरहेकी थिएँ । अलिअलि अप्ठ्यारो बाँकी नै थियो । त्यही बाँकी रहेको अप्ठ्यारोसहित उत्तर दिएँ, “पिसाब पनि पोल्छ ।”
उनले केके लेख्दै मसँग फेरि सोधे, “अनि अरू के हुन्छ नि ?”
मैले लजाउँदै भनें, “महिनावारी समयमै हुँदैन ।”
“अरू त खासै त्यस्तो केही छैन । अनि मलाई मिन्स पनि सत्र वर्षमा भएको । ब्लड पनि देखामात्रै पर्छ ।”
उनले औषधि लेखे र मतिर हेर्दै मुसुक्क हाँसे । उनको हेराइ बोल्दै नबोली मलाई आफूतिर बोलाएजस्तो र मलाई नै भनेजस्तो होकि लाग्यो, “आऊ, म तिमीमा समाहित हुन चाहन्छु । म तिमीलाई धेरै–धेरै माया गर्छु ।”
मुखले चाहिं उनले भने, “ल यो औषधि लेखिदिएको छु । एक हप्ता खाएर हेर्नुस् र फलोअपका लागि आउनु होला ।”
मैले उनीबाट औषधि लेखिएको कार्ड लिएँ र ‘हुन्छ’ को इशारामा शीर हल्लाएर उठें । आफ्नो समस्या बताउन गाह्रो भइरहेको मलाई यतिबेला भने हलुका महसुस भइरहेको थियो । मानौं, मैले वर्षौंदेखि थाप्लोमा बोक्दै आइरहेको ठूलै भारी बिसाएकी छु ।
उनले थप भन्न थाले, “पानीचाहिं बढी नै पिउनुहोला । औषधी खाउन्जेलसम्म चिल्लो, पिरो र अमिलो चिज नखानु होला । मैले रगत र पिसाबको जाँच लेखिदिएको छु । त्यसको रिपोर्ट आएपछि रिपोर्ट आउनुहोला ।”
बाहिर निस्किएपछि पो मैले थाहा पाएँ, म त भित्रको संसारमा पूरै डुबेकी रहेछु । भित्र बसुन्जेल अहँ, मलाई कतैका कुनै कुरा याद आएन । सायद ममा बाहिर पनि संसार छ भन्ने बोध नै हराइसकेको थियो ।
त्यो मादक संसार सधैं कायम रहने हो भने मानिस कहिल्यै दुःखी हुने थिएनन् होला ।
म रगत र पिसाब जाँच्न ल्याबतिर गएँ । त्यहाँ सिरिन्जभरि रगत निकाल्यो, रगत जाँच्ने मान्छेले । उसले रगत तान्दा मलाई साह्रै दुख्यो । ऊ डाक्टरजस्तो माया लाग्दो थिएन । न त उसले मलाई दुख्यो भनेर नै सोध्यो । हुन पनि उसलाई सबैलाई यस्तो प्रश्न सोध्ने फुर्सद पनि कहाँ होस् र ? उसका लागि सबै बिरामी एकैनास भए पनि बिरामीहरूका लागि त ऊ एकै हो नि । उसले यति सोचिदिए अलि कम दुख्ने थियो कि ।
प्रेम मात्र प्रेम हुनुपर्छ । त्यसमा न जोड हुन जरुरी छ, न घटाउ नै । प्रेम शब्दै प्यारो । तर, प्रेमले जति मिठास दिन्छ, त्यति नै नमीठो दुःख पनि । प्रेम गर्नलाई मन चाहिन्छ भने प्रेम सफल पार्नलाई हिम्मत पनि चाहिन्छ । सम्बन्ध जोगाउने कोसिस दुवै पक्षबाट हुनुपर्छ ।
उनी पनि खुल्न थालिसकेका थिए । “तिम्रो ओठ कति राम्रो के ! मलाई देऊ, म लैजान्छु ।” डाक्टर प्रकाशले मेरो ओठमा हेर्दै मसँग भने ।
“हैन होला !” मनमनै उनले अझै मेरो प्रशंसा गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो ।
“हो क्या ! तिम्रो कपाल पनि साह्रै राम्रो छ ।” उनले मुस्कुराउँदै भने । उनको मुस्कान देखेपछि म सम्मोहित भइहाल्थें । मानौं, म मुस्कानभित्रै डुब्थें र बाहिर निस्कनै सक्दिनथे ।
“ओठ काटेर लैजानुस् न त । गोजीमा हालेर राख्नुस्, त्यसैसँग जीवन बिताउनुस् । कपाल पनि काटेर दिन्छु, लगेर घरमा झुन्ड्याएर राख्नुस् ।” मैले अलिकति लजाउँदै उत्तर दिएँ । सायद मेरो जवाफ ठाडो भएर होला, उनी मलाई एक तमासले हेरिरहन्थे ।
यदि ओठ काट्ने हो भने उनले मलाई फर्केर पनि हेर्दैनथे होलान् । फेरि ओठ नै भएन भने त अनुहारको शोभा नै कहाँ बाँकी रहन्छ र ? कपाल पनि टाउकाबाट छुट्टिएपछि त्यसको महङ्खव रहँदैन । त्यही कपालको टुक्रा खानेकुरामा प¥यो भने मान्छेले खाना खानै घिनाउँछन् ।
यो कुरा मान्छेलाई थाहा नभएको होइन । तर पनि प्रेममा एक–अर्काले यस्तै–यस्तै भनेर प्रशंसा गर्ने गर्छन् । सायद प्रेममा जे पनि जायज हुन्छ । घन्टौं एकअर्काको तारिफमै बित्यो हामीबीच । म त प्रकाशको बोलीमै मख्ख थिएँ । उनले असम्भव कुरा नै गरे भने पनि सुनिदिन्थे“ र पत्याइदिन्थे“ पनि ।
हामी कन्याम पुगेका थियौं, घुमघाम गर्न । हामीले प्रेमको उच्च शिखरमा पाइला टेकिइरहेका थियौं । म उनलाई अत्यन्तै मन पराउँथें । उनले पनि मलाई मन पराउँथे । यतिबेला म उनको अँगालोमा बाँधिएको थिएँ । म उनको पाखुरालाई संसारकै सबैभन्दा सुरक्षित स्थान मानेर त्यही पाखुरामा टाउको अड्याइरहेकी थिएँ, कुनै अज्ञात प्रदेशमा हराइरहेकी थिएँ ।
कन्याम जानुभन्दा अगाडि हामीमा धेरै सामीप्यता बढिसकेको थियो । शारीरिक स्पर्शको सुखद् अनुभूति बटुल्न मात्रै बाँकी थियो । पहिलोपटक मात्रै अप्ठ्यारो भयो, उनीसँग जाँच गराउन । त्यसपछि भने मैले उनीसित कुनै अप्ठ्यारो मानिनँ र ढुक्क भएर उनका सामु आफ्ना समस्याहरू राखें ।
उनले पनि मलाई प्रत्येक सात दिनमा फलोअपमा बोलाए । डाक्टरले त्यसै पनि बिरामीको स्वास्थ्यप्रति विचार पु¥याउँछन् । त्यसमा उनले मलाई अलि बढी नै ख्याल गर्दै गए । मेरो रगत र पिसाबको परीक्षण गर्न भनिएको थियो । रिपोर्ट आउँदा मैलेभन्दा पहिला नै ल्याएर हेरिसकेका रहेछन् उनले ।
उनी मेरा हरेक कुरामा गम्भीर देखिन्थे । सायद उनको चिन्ता मप्रतिको माया थियो । पहिलो पटक उनलाई देखाउँदा महिनावारी भएको सातौं दिनमा देखाएकी थिएँ । त्यसपछि अर्को महिनावारी नहुँदासम्म मलाई त्यहीं बसेर फर्किनु थियो । नत्र ताप्लेजुङबाट झापा आउन सजिलो थिएन । एक त घरायसी काम, त्यसमाथि टाढा ।
म र उनी दुवैजना योभन्दा पहिला पनि राम्रोसँग बाँचेकै थियौं । तर खै किन हो, यो बेला म उनीबिना बाँच्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो । उनी पनि मलाई त्यही भन्थे ।
श्रीकृष्ण र उनका साथीहरूका बाच्छाहरू ब्रम्ह्माले छल गरेर लैजाँदा कृष्णले दुरुस्तै आफ्ना साथीहरू र बाच्छाहरू तयार गरेका थिए । एकदिन प्रेमवस ग्वालाका बाबुआमाले आफ्ना छोराहरूलाई र गाईहरूले आफ्ना बाच्छाहरूलाई टाउको सुँघेर प्रेम दर्साएका थिए ।
ठीक त्यस्तैगरी प्रकाशले मेरो टाउको सुँघिरहेका थिए । म उनको छातीमा आफ्नो टाउको राखेर बसेकी थिएँ । यसरी बस्दा म जता हेरे पनि सुन्दर दृश्य देखिरहेकी थिएँ । स्वर्गीय आनन्दमा थियौं सायद हामी । टाढाको क्षितिजतिर हेरेर टोलाइरहेकी थिएँ म ।
‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ भनेको सायद यही होला । त्यो बेला मेरा लागि संसारमा फूलबाहेक केही थिएन । फूल पनि अत्यन्तै सुगन्ध सहितको । त्यत्तिकै मादकतापूर्ण पनि ।
कन्यामको चिया बगानको रमणीयतामा हामी हराइरहेका थियौं । चियाको एउटा बुटा र अर्को बुटाबीच आत्मीयता गाँसिएझैं गाँसिएका थियौं, हामी पनि । हावाको पातलो स्पर्श पाएर चियाका बुटाहरू हल्लिन्थे, मन्द मुस्कान छर्दै । हामी हल्लिइरहेका चियाका कलिला मुनाहरूमा भविष्यको हरियालीपन भेट्टाउँथ्यौं ।
सम्बन्ध पनि चियाका कलिला मुनाजस्तै हुन् । पहिला त्यो कति मुलायम हुन्छ, रहरलाग्दो । बिस्तारै त्यसमा प्रगाढता भित्रिँदै जान्छन् । छिप्पिँदै जान्छन्, मुनाहरू र परिपक्वता हासिल गर्दै जान्छ । जसरी मुनाहरूलाई सामान्य हावाको झोक्काले लछार्न सक्छ, तर ती पातहरु परिपक्व हुँदै गएपछि भने ठूलै आँधी आए पनि लछार्न सक्दैनन् ।
प्रेम एउटा रङ्गीन डोरी रहेछ, कहाँ–कहाँको मान्छेलाई बाँधेर राख्ने । त्यो बन्धन अलिकति पनि बोझिलो नलाग्ने । बरु अझै कसिलो गरी बाँधिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने । त्यही डोरीमा सधैभरि बाँधिएर बस्न पाए त जीवन कति आनन्ददायक हुन्थ्यो होला ।
हरेक प्रेमजोडीले यस्तै त सोच्छन् होला, प्रेमको पूर्णता विवाह र प्राप्तिमै हुन्छ । अब मलाई उनको हुनु थियो र उनलाई मेरो ।
अस्पतालमा पहिलो दिन मलाई देखेपछि उनले पनि मलाई मन पराएका रहेछन् । दिनभरि मलाई नै याद गरिरहे रे । खासगरी मेरो निर्दोष स्वभाव मन परेको रहेछ उनलाई ।
मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो । दिनभरि उनीसँग भेट भएको पल याद आइरहेको थियो ।
किन त्यस्तो हुन्छ होला ? उनी कहाँको, म कहाँको ? सायद उनको र मेरो सम्बन्ध बन्नु थियो होला । हाम्रो भेट त एउटा बहाना मात्रै थियो होला । यस्तै लाग्यो मलाई ।
मैले उनीभन्दा पहिला पनि धेरै मान्छेहरू भेटेकी थिएँ । उनले पनि मजस्ता कैयौं मान्छेहरू भेटेका थिए होलान् । तर मलाई उनी नै र उनलाई म नै याद आउनुपर्ने । त्यही भएर त पराइसँगको सम्बन्ध यति प्यारो हुने भएको होला ।
सात दिनपछि फलोअपमा जाँदा उनीसँग केही कुरा गरेरै छाड्छु भन्ने मैले सोचेकी थिएँ । तर मैले मात्रै कुरा गर्नै परेन । त्यो दिन हामी दुवै उत्साहपूर्वक अलि लामो समय एक–अर्कासँग बोल्यौं । उनैले मेरो मोबाइल नम्बर मागे । मैले अलिकति पनि आनाकानी नगरी नम्बर दिएँ । त्यो बेला सादा मोटोरोला सेट बोक्ने पनि गन्य नै मानिन्थे । म पनि उनका अघि गन्य नै भएँ क्यार ।
“म भरे फोन गर्छु तिमीलाई ।” उनले मलाई हेरेर भने । अघिल्लोपटक तपाईं भनेर सम्बोधन गरेका उनले यस पटक भने ‘तिमी’ भनेका थिए । ‘तिमी’ भन्दा झनै नजिक भएको अनुभूत हुँदोरहेछ ।
“हुन्छ ।” मैले भुइँतिर हेरेर सहजै अनुमति दिएँ ।
अरूलाई भए त म पक्कै दिन्नँ थिएँ, आफ्नो नम्बर । नम्बर पाएपछि केटाहरूको बानी कस्तो हुन्छ भनेर मलाई थाहा नभएको कहाँ हो र ? ताप्लेजुङमा मसँगै पढाउने शिक्षकले नम्बर मागेका थिए एकपटक । मैले पनि सँगै काम गर्ने मानिसलाई नम्बर दिँदा केही फरक पर्दैन होला भन्ठानेर दिएँ तर त्यसपछि उनको त काम नै भयो, खाली मिसकल मात्रै गर्ने । पछि प्रधानाध्यापकलाई नै भनेपछि मात्रै उनले दुःख दिन छाडे मलाई । प्रकाशले पनि त्यसै गर्लान् र ? पक्कै गर्दैन । किनकि ती शिक्षकसँग मेरो आँखा जुधेकै थिएन । तर, प्रकाशसँग त मेरो प्रेमको हार उनिँदै थियो ।
बेलुका उनको फोन आयो । आधा घण्टाजति कुराकानी गरेछौं हामीले । त्यति लामो समय कुराकानी गर्दा पनि मलाई चाहिँ एक मिनेटजस्तो पनि लागेन ।
अल्बर्ट आइन्स्टाइनले त्यही भएर ‘समय सापेक्ष हुन्छ’ भनेका थिए होलान् । कहिलेकाही“ समय बित्दै बित्दैन । जस्तै, उनले मसँग फोन नम्बर मागेको दिन मलाई कहिले भरे आउँला जस्तो भइरहेको थियो । मिनेट–मिनेटको हिसाब गरिरहेकी थिएँ । बेलुका आउन वर्षौं कुर्नु परेजस्तो सकस परेको थियो मलाई ।
हामी फोन–संवादमा मात्र सीमित रहेनौं । संवादका खुट्किलाहरू उक्लिँदै जाँदा भेटघाट पनि गर्न थाल्यौं । प्रेम–प्रस्ताव उनैले राखे, “आइ लभ यु कल्पना ! तिमी मलाई साथ देऊ, म पनि तिमीलाई सधैंसधैं साथ दिन्छु ।”
आफूलाई मन परेको मान्छेको प्रेम–प्रस्ताव स्वीकार्न पनि कति गाह्रो ।
मैले जवाफ फर्काएँ, “आइ लभ यु टू ।” यति भन्दा मेरो मुख हिउँदको खहरेझैं सुकिसकेको थियो । सुख्खा र उष्ण । पानी पाएकी भए दुई लिटरजति नै पिउँथे हुँला, मुख भिजाउन । तिर्खा मेटाउन ।
मैले सजिलै उनको प्रस्ताव स्वीकारें । हाम्रो प्रेम कन्यामका डाँडाकाँडासम्म आइपुग्दा हामी एक–अर्कालाई गहन रुपले बुझ्ने भइसकेका थियौं ।
मैले उनको कोमल दाह्री सुम्सुमाउँदै भनें, “अब हामी बिहे गरेर सँगै बसौं ।” त्यसपछि मैले उनको मुहारमा हेरें । उनको अनुहार अलिकति अँध्यारो भएको देखें मैले । उनको अनुहार अँध्यारो हुनु भनेको मेरो मनमा पनि अँध्यारो नै छाउनु थियो ।
“किन ? केही समस्या छ र ?” मैले उनलाई हेरेर सोधें ।
“छैन । तर…।”
“अहिल्यै बिहे गर्न केको हतार ? अलि पछि गरौंला नि । हुन्न ?”
विचार मिलेपछि धेरै कुरा मिल्छ । जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान भएका व्यक्तिबीच अन्तरविरोध तथा विवाद कम हुन्छ । त्यस कारण दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाउनका लागि केही महङ्खवपूर्ण कुरामा महिला र पुरुषबीच समान दृष्टिकोण हुनु आवश्यक हुन्छ । होइन भने, जीवन नारकीय बन्न पुग्छ । पैसा, पद, प्रतिष्ठा तथा काम आवश्यक कुरा हुन् । तर यी कुराले आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई ओझेलमा पार्नु हुन्न भन्ने कुरामा विचार पु¥याउनु पर्दछ । तसर्थ, सम्बन्धलाई बढी महङ्खव दिने व्यक्तिलाई जीवनसाथी बनाउनुपर्छ । उनले भने केहीपछि मात्रै बिहे गरौं भन्ने संकेत ग¥यो । एकअर्कालाई अझै बुझौं भन्न खोजेका थिए कि, अन्य कारणले त्यसो भनेका थिए, त्यो मैले बुझिनँ त्यतिबेला ।
उनको कुरा सुनेर मलाई बिहे छिट्टै गर्नुपर्छ जस्तो मात्रै लाग्यो । यदि उनले मलाई छाडिदिए भने म त मर्छु होला । ‘फेरि के भर ? मन बद्लियो भने ?’ भनेझैं लाग्यो ।
“बिहे नगर्ने हो भने त म कहिल्यै भेट्दिनँ अबदेखि ।” मैले उनलाई अलिकति घुक्र्याउने शैलीमा भनें र मुन्टो बटारेर पछाडि फर्किएँ ।
“हस् ।” उनले जिस्क्याउँदै भने । अँगालो मारेर मेरो घुमेको मुन्टो आफूतिर फर्काएर मेरो ओठमा आफ्नो ओठ लगेर चुम्बन गरे ।
लगभग एक मिनेटसम्म हामी त्यही अवस्थामा रह्यौं । त्यो आनन्ददायक क्षण…। कसरी बयान गरुँ र त्यसको ? जति बयान गरे पनि शब्दहरूको कमी नै हुन्छ ।
“के रे ?” उनले मेरो ओठबाट आफ्नो ओठ निकालेपछि मैले मुड्की पारेर उसको छातीमा हिर्काएजस्तो गरें ।
बिहेको कुरा यत्तिकै ट¥यो । मैले आनन्ददायक वातावरण बिगार्न उपयुक्त ठानिनँ । तसर्थ, त्योभन्दा अगाडि यस विषयमा कुरा गरिनँ । उनले पनि कुरा उठाएनन् ।
कन्याम यात्राको बयान गर्नलाई भने दुईचार शब्दले काफी हुँदैन । चियाबारीमा अवस्थित लभ डाँडाको फाइदा हामीले दिनभरिमा उठायौं । त्यो रात हामी कन्यामको इलामेली होटलमा बस्यौं ।
आमालाई नभनी प्रकाशसँग घुम्न जाँदा मलाई नरमाइलो पक्कै लागेको थियो । नरमाइलो त लागिरहेको थियो नै, तर त्योभन्दा पनि धेरै खुसी थिएँ म । किनभने आफ्नो प्रेमी मेरो साथमा थियो ।
बेलुका हामीले रमाइलो गर्ने भयौं । यो सुन्दर समयलाई हामी खेर जान दिन चाहँदैनथ्यौं ।
होटलको कोठामा छिर्नुभन्दा पहिला प्रकाशले वियर मगाए । मैले पनि त्यो रमाइलोमा कुनै हस्तक्षेप गर्न चाहिनँ । उनले वियर माग्दा कस्तोकस्तो भने लागिरहेको थियो । मैले अहिलेसम्म वियर खाएकी थिइनँ र खाने मान्छेसँग सङ्गत पनि गरेकी थिइनँ ।
कोठाभित्र छिर्नेबित्तिकै उनले मलाई अँगालो मा¥यो र भने, “तिमीले कहिल्यै वियर खाएकी छौ ?”
मैले उनको अँगालो फुत्काउँदै भनें, “नाइँ, छैन । हाम्रो घरमा यस्तो चलन नै छैन । हाम्रो गाउँमा लिम्बुहरूको घरमा खाने गर्छन्, तर हामीले उनीहरूको घरमा पानीसमेत खाँदैनौं । बाले मार्नु हुन्छ ।”
उनी हाँसे एकपटक र भने, “त्यसो भए आज बाहुनीलाई म वियर चखाउँछु । हुन्छ ?”
मैले भनें, “नाइँ, म त खान्नँ ।”
“त्यसो भए वाइन खाने नि त, ल ?” उनले चेपारे शैलीमा भने ।
वियरको बारेमा सुनेकी थिएँ मैले । त्यो एक किसिमको मदिरा नै हो भन्ने लागेको थियो । वाइनका बारेमा चाहिं सुनेकी थिइनँ । त्यसैले मैले सोधेँ, “त्यो भनेको चै“ के हो नि फेरि ?”
उनले मुसुक्क हाँस्दै भने, “जुस हो, जुस ।”
यत्तिकैमा बाहिरबाट आवाज आयो, “ढोका खोल्नुस् त प्लिज ।”
म ओछ्यानमा ब्याग राख्दै थिएँ । प्रकाश आफ्नो सादा नोकिया फोन चार्ज गर्न लाइनको प्लक खोज्दै थिए । उनले नै ढोका खोले । होटलको भाइले वियर लिएर आएको रहेछ । टुबोर्ग वियर । वियरसँगै ल्याएको थियो– टुबोर्ग नै लेखेको ठूला दुईवटा गिलास पनि ।
“ला, मैले त खाना नै मगाएनछु । भाइ, दुई ठाउँमा खाना लिएर आऊ है ।” प्रकाशले भने । इलामको चिसो मौसममा तातो खाना । त्यसमा कालो दाल, रायोको साग र अकबरे खुर्सानी । मेरा लागि त यी नयाँ चिज थिएनन् तर प्रकाशका लागि भने नौलो चिज थिए । “एउटा रेड वाइन पनि ल्याइदेऊ है ।” प्रकाशले होटलको भाइलाई अ¥हाउँदै भने । मैले ‘नाइँ, हैन’ भनें । उनले थपे, ‘तिमी ल्याऊ न चुपचाप’ । प्रकाशले जिद्दी गरे ।
“हस् ।” होटलको भाइले मलाई र प्रकाशलाई पालैपालो पुलुक्क हे¥यो र ढोकाबाट बाहिर निस्क्यो ।
प्रकाशले भने, “लाटी, वाइनले त फाइदा गर्छ ।” केही समयपछि ‘डिभाइन’ लेखेको वाइन, गिलास र तातो–तातो खाना लिएर होटलको भाइ आयो । प्रकाशले आफूलाई वियर भरे, मेरा लागि आधा गिलास वाइन । भने, “थाहा छ ? वाइनलाई पूरा गिलास भरेर खानु हुँदैन । वाइनलाई त आधा गिलास राखेर बिस्तारै हल्लाउँदै, मुखमा राखेर जिब्रो चलाउँदै मजा लिएर मात्रै निल्नुपर्छ ।” उनी बयान गर्दै थिए, भगवानका पालाको सोम रसको । धर्मग्रन्थका अनुसार सोम रसको प्रयोजन अर्कै थियो भन्ने छ । तर, आज सबै दुःख, सुख भुलाउनका लागि बहाना बनेको छ । मैले उनलाई भनें “तपाईं रक्सी व्यापारी हो कि डाक्टर ?” उनले हाँस्दै भने, “हैन मेरो घरछेउको पसलेबाट थाहा पाएको हुँ यी कुरा ।”
“फेरि हामी डाक्टर चैं मान्छे नै होइनौं र ? हामीलाई पनि त जहिल्यै हस्पिटल, घर, एकै खालको दिनचर्या हुँदा झ्याउ लाग्छ नि । कहिलेकाहीं बेला मौकामा रमाइलो गर्दा के फरक पर्छ ।” उनी आफूलाई डाक्टरभन्दा पहिला आफू सामान्य मानिस भएको प्रस्ट्याउँदै थियो ।
अन्ततः उनले मलाई पनि मदिरा पिउन बाध्य तुल्यायो । खानासँगै मैले वियरको स्वाद पनि चाखें । वाइनको पनि अनुभव गरें । उनले पनि अलिकति वाइन खाए । वियर र वाइन सकिँदासम्म हामीमा नशा चढिसकेको थियो । खाना खाने बेलामा त खानेकुरा मुछेर मुखमा हाल्दा पनि पूरै शरीरमा रोमाञ्चकता उत्पन्न भइरहेको थियो ।
त्यो रात हामीबीच विषयवस्तु धेरै अगाडि बढ्यो । पहिलो अनुभव साँच्चै नै कहिल्यै भुल्न नसकिने हुँदो रहेछ । मलाई अहिले पनि त्यो पल जस्ताको तस्तै याद छ । जति नै मादक पदार्थ सेवन गरे पनि शारीरिक सुख र सन्तुष्टिलाई जित्न नसक्दो रहेछ । त्यही भएर त मान्छेहरू मदिरा सेवन गरेपछि चरम आनन्दानुभूतिको क्रियामा रमाउन चाहँदा रहेछन् ।
एक–अर्काको चरम स्पर्शबाट प्रारम्भ भएको यात्रा अब ओठ हुँदै कताकता सल्बलाइरहेका थिए । म हराइरहेकी थिएँ, कुनै निर्जन जङ्गलबीच हराइरहेका मृगका अबोध बच्चाहरुझैं । कुनै टाकुरामा विचरण गरेजस्तो अनुभूति गर्दै थिए सायद प्रकाशचाहिं । पहाडमा कोही चढ्दा पहाड झन् रमाउने रहेछ । सायद पहाडले आफ्नो पीडा बिर्सिन्छ होला । त्यो यात्रामा सँगालेका दुखाई र आनन्दको म कसरी वर्णन गरुँ …?
पुरुष बलको स्वरुप र स्त्री कोमलताकोे स्वरुप । आ–आफ्ना स्वरुप पोखेर हामी एक–अर्कामा लीन हुन थाल्यौं । हाम्रो प्रेम आँखाबाट सुरु भएर अनगिन्ती मोड हुँदै गुज्रियो, केही मिनेटको अन्तरालबीच । म पनि पुरुषोचित अङ्गहरूसँग परिचित हुँदै गएँ ।
म पनि बिस्तारै पग्लिन थालें, हिउँदका दिनमा ग्लेसियर पग्लिएझैं । केही समयपछि उनको सबै बलिष्ठता कुनै नदीको पानीजस्तै बेगले बग्यो मभित्र । मलाइ यदि भर्खरै मेरो र प्रकाशबीच युद्व भएको भए मलाई विजेता घोषणा गर्न मन थियो । मेरो कोमलताले उनको बलिष्ठतालाई जितेको थियो ।
त्यसपछि म उनलाई महसुस गर्न थालें । केवल उनलाई, मेरो प्रकाशलाई….।
शिखर उक्लिएका यात्रीहरू थकानले पिल्सिएर शिथिल भएझैं उनी पनि शिथिल बने । लल्याकलुलुक भए, सूर्यको किरणले बिथोलेको लज्जावती झारझैं ।
परमानन्दको अनुभव गरेपछि उनी त्यत्तिकै मेरो शरीरमाथि पल्टिए । युद्ध जितेको सिपाहीले लामो सास फेरेझै सास फेरे उनले पनि । त्यतिन्जेलसम्म उनको बलिष्ठता मभित्र कोमलता भएर हराइसकेको थियो । शिथिलीकरणसँगै उनले आफ्नो पूर्ण शरीर ममाथि बिसाए । कुनै भरियाले उकालीमा गहु्रँगो भारी बिसाए ।
यतिबेला म केटाकेटी हुँदा बेहुलाबेहुली र बुढाबूढी भएर भाँडाकुटी खेलेको सम्झिरहेकी थिएँ । आफू आमा बनेर ढुङ्गाको बच्चा बोकेको पनि सम्झिएँ ।
सोचें, “मानिसले आफ्नो उमेरअनुसार विविध अनुभवहरू सिक्दै जाने रहेछन् । त्यो भाँडाकुटीमा ढुङ्गाको बच्चा बोक्ने म आज आफ्नै बच्चा बोक्ने उमेरमा पुगेकी छु ।”
त्यो रात हामी दुवैले आफ्नो जवानीको अनुभव ग¥यौं । र, एक–अर्काको अँगालोमा बेरिएरै निदायौं त्यो रात । त्यो त्यस्तो अविस्मरणीय निद्रा थियो, जुन सधैं मिल्दैनथ्यो । म निदाइनँ । हराए कतै प्रकाशभित्र त्यो रात ।(उपन्यास ‘अधवैंशे आइमाइ’को एक अंश)